Akwụkwọ kacha mma site na Javier Sierra, Planeta Prize 2017 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ kacha mma Javier Sierra dere
Carmen Guillen | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ
Yesterdaynyaahụ, na etiti ụbọchị, Xavier Sierra ghọrọ onye mmeri nke 2017 Planet Award ya na oru ya "The keakamere ugwu", nke e dere ma webata n'okpuru aha Victoria Victoria. N'ikpeazụ, a ga-ebipụta ọrụ a na Editorial Planeta n'ụzọ doro anya, n'okpuru aha "The-adịghị ahụ anya ọkụ".
Mana, olee akwụkwọ ndị ọzọ nke ezigbo Javier Sierra dere? Yougụọla ihe ọ bụla na mbụ ya? Taa, na Actualidad Literatura, anyị na-eweta akwụkwọ 3 ya kacha mma. Anyị ga-agwa gị ntakịrị ihe gbasara nke ọ bụla n’ime ha ma anyị ga-agwa gị nyocha ole o kwesiri maka nkatọ edemede.
1 "Mmụọ ozi ahụ furu efu" (Javier Sierra, 2011)
2 "Nri abalị nzuzo" (Javier Sierra, 2005)
3 "Nwanyị na-acha anụnụ anụnụ" (Javier Sierra, 1988 na 2008)
"Mmụọ ozi ahụ furu efu" (Javier Sierra, 2011)
Ka ọ na-arụ ọrụ na mweghachi nke Pórtico de la Gloria na Santiago de Compostela, Julia Álvarez na-enweta akụkọ na-agbawa obi: a tọọrọ di ya na mpaghara ugwu ugwu na ugwu ọwụwa anyanwụ Turkey. N’amaghi ama, Julia ga esonye n’agba di oke egwu ichikota okwute abuo mgbe ochie, nke g’eme ka ha na ndi ozo di iche ma nwekwaa mmasi ebe ha no site na ndi isi ochichi nke United States.
Ọrụ nke na-ahapụ mgbakọ niile nke ụdị a, na-emegharị ya ma na-eme ka onye na-agụ ya nwee ọhụụ na ha agaghị echezọ.
Akwụkwọ a nke 544 peeji Ọ ga-emikpu gị n'ime ụwa akụkọ ifo nke dị ka ezigbo adị na ịmara nke akụkọ ihe mere eme dị mkpa dịka ọ bụ omenala na akwụkwọ Javier Sierra ọ bụla. Eziokwu ọzọ dị mkpa ịgbakwunye banyere ya bụ na site na akwụkwọ a ọ rụzuru ya Latin Book Awards si United States.
"Nri abalị nzuzo" (Javier Sierra, 2005)
Akwụkwọ a dara ọtụtụ ma ọ bụ na ọ dabara na oge na ndị a ma ama "Da Vinci Usoro" de Dan Brown. Ọgwụ na aro, "Nzuzo nri abalị" bụ akwụkwọ akụkọ na-enye echiche mgbanwe n'aka ma Leonardo da Vinci ma onye isi ya, Nri Anyasị Ikpeazụ. Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a, ị gaghị ahụ Renaissance n'otu ụzọ ahụ ọzọ.
Milan, 1497. Leonardo na-etinye aka n'ihe gbasara nnukwu mgbidi ya. Ma Pope Alexander nke Isii ghọtara na otiti ya na-ezochi ozi nkwulu nke ọ kpebisiri ike ịkọwa iji katọọ onye dere ya.
Enweghi Grail ma obu Oriri Nsọ di na Nri ikpeazu a; ọ dịghị ọbụna obere nwa atụrụ dị na efere ndị ahụ, ndịozi ahụ na-ezokwa eserese nke ndị jụrụ okwukwe narị afọ nke XNUMX dị mkpa. Gịnịkwa mere Leonardo ji gosipụta onwe ya n'etiti ha?
Wholewa dum nke amaghi na ọ ga-adị mma ịchọpụta site n'enyemaka nke Nrite Ọhụrụ Planet ọhụrụ 2017. you cheghị?
"Nwanyị na-acha anụnụ anụnụ" (Javier Sierra, 1988 na 2008)
Ọ bụ ezie na na mbụ, "Nwanyị na-acha anụnụ anụnụ" E bipụtara n'afọ ahụ 1988, E degharịrị ma bipụta ya ọzọ na 2008. Ọzọkwa, akwụkwọ ebe mgbagha, ihe omimi na enigmas bụ usoro nke ụbọchị ahụ.
E nwere ihe nzuzo ndị Providence na-enweghị ike izobe ọzọ. Nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi kọwaa ihe kpatara ọrụ sayensị Vatican ji wee weghara onyonyo na ụda site na ime njem gara aga bụ Ngalaba Nchebe US na ndị agha Jennifer Narody, otu n'ime ndị ọrụ kachasị mma, iji chee onyinye ihu n'oge nnukwu. mystics.
Ka ọ dị ugbu a, na Spain, Destiny na-eduga otu onye nta akụkọ na-eto eto iji nyochaa ndụ nke otu nọn sitere na Golden Age onye, ​​na-ahapụghị onye ode akwụkwọ ya na Soria, ji ọrụ ebube kwusaa ozi ọma na New Mexico, kilomita 10.000.
Usoro o ji nwayọ mechie ọnụ na-ezochi echiche na-awụ akpata oyi. Site na akwụkwọ akụkọ a, Javier Sierra na-ekpughere anyị ụdị akụkọ na-akpali akpali nke "akwụkwọ nyocha."
Gị onwe gị, olee akwụkwọ ọzọ ma ọ bụ karịa, olee akwụkwọ 3 ọzọ ị na-ewere dị ka nke kachasị mma site n'aka onye edemede? Javier Sierra aghọwo otu n'ime ndị edemede Spanish nke kacha ere ọtụtụ ndị mba ụwa ghọtara, yabụ anyị chere na Nrite Planeta (ihe dị ezigbo mkpa na Spanish) ga-abụ otu n'ime ndị ga-enwetara.
Ihe ọ bụla ọ ga-abụ n’ọdịnihu, ebe Akwụkwọ akụkọ Planeta ọ na-emecha nkọwa nke akwụkwọ ọhụrụ na ọrụ mmeri nke Sierra, lee ị nwere ezigbo akwụkwọ 3 dị mma site n'aka onye edemede. Ebee ka ị ga-amalite njem njem edemede gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma Javier Sierra dere
Thompson na Wambaugh, ndi oji agba oji maka otutu udu mmiri
Otu a ka anyị si eme ncheta ụbọchị ndị ode akwụkwọ